» बुद्ध लामा र केबिका खत्रीलाई यति धेरै प्रेम
बुद्ध लामा र केबिका खत्रीलाई यति धेरै प्रेम
३ पुष २०७७, शुक्रबार १७:३९
मकवानपुर, ३ पुस । विश्वप्रसिद्ध डान्सिङ रियालिटी शो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको चर्चित बुद्धिका जोडीलाई दर्शकले कति प्रेम गर्छन् भन्ने कुरा फाईनल नजिक आउँदा झनै छर्लङ्ग भएको छ । डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको यही शुक्रबार हुने फाईनलका लागि तयारी गरिरहेको यो जोडीलाई दर्शकहरुले विजेताका रुपमा हेर्न चाहेको कुरा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत बताईरहेका छन् । तर उनीहरु लगातार ५ पटक बटम लाईनमा परिसकेको कुराले भने बुद्धिका जोडीको फ्यानहरु छक्क परेका छन् । गायक बुद्ध लामा र कोरियोग्राफर केबिका खत्रीका फ्यानहरुले यसै च्यानलका भिडियोहरुमा पनि ‘हामीले गरेको भोट कहाँ गयो ?’ भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । बुद्ध र केबिकाको स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि फ्यानहरु भएकाले उनीहरुले समेत भिडियोको कमेन्ट बक्समा हाम्रो भोट कहाँ गयो ? कसरी बटम लाईनमा पर्यो ? भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । हुनपनि कमेन्टहरु हेर्दा बुद्ध र केबिकाको पक्षमा दर्शकहरु हुल बाँधेर लागेको अनुमान लाउन सकिन्छ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
यस च्यानलमा डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका बारेमा १०५ वटाभन्दा बढी भिडियोहरु अपलोड भएका छन् । ती भिडियोहरुमा दर्शकहरुले धेरै जसो बुद्ध र केबिकाकै बारेमा कमेन्ट गरेका छन् । सम्भवत ९५ प्रतिशतभन्दा बढी दर्शकहरुले बुद्ध र केबिकाकै बारेमा कमेन्ट गर्ने गरेका छन् । अचम्मको कुरा त यो पनि छ कि बुद्ध र केबिकाको विषयमा नभई अरुका बारेमा बनेका भिडियोमा पनि दर्शकहरुले बुद्ध र केबिकाकै बारेमा कमेन्ट गर्ने गरेका छन् । तपाईले यस च्यानलका डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालका बारेमा बनेका पछिल्लो भिडियोहरु हेर्नुभयो भने पनि त्यसमा गरिएका कमेन्टहरु देख्नसक्नुहुन्छ । ती कमेन्टहरुका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने बुद्ध र केबिकालाई दर्शकहरुले कति धेरै प्रेम गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
दर्शक श्रोताको प्रेमका बारेमा पनि यो जोडीले विभिन्न अन्तरवार्ताहरुमा चर्चा गर्दै सबैलाई आभार प्रकट गर्ने गरेका छन् । यसअघि मात्रै हिमालय टिभीको च्यानलबाट अपलोड भएको फाईनलसम्बन्धी कुराकानीमा पनि गायक बुद्ध लामाले आफुहरु फाईनलसम्म आउनुमा दर्शकहरुकै माया भएको बताएका छन् । फाईनलमा दर्शक भोटकै आधारमा नतिजा आउने भएकोले अबको बाँकी समय पनि दर्शककै हातमा निर्णय भएको बताएका छन् । उनले फाईनलमा कस्तो प्रस्तुति आउँदैछ भन्ने बारेमा पनि थोरै कुरा खुलाएका छन् ।
बुद्ध र केबिकालाई धेरै दर्शक श्रोताहरुले विजेता बन्न सक्ने ठूलो सम्भावना भएको जोडीका रुपमा हेरिरहेका छन् । चर्चित गायक समेत रहेका बुद्ध लामा र चर्चामा रहेकी कोरियोग्राफर केबिका खत्रीलाई माया गर्नेहरुले हरेक भिडियोहरुमा उनीहरुको नामै लिएर विजेता हुने दाबी समेत गर्दै आएका छन् । उनीहरुले फाईनलमा आईपुग्दा जम्मा ४३९ अंक प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुले नवौँ हप्ताको पहिलो दिन र एघारौँ हप्ताको पहिलो दिन गरी जम्मा २ पटक पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका छन् ।